Toogasho ka dhacday Fort Hood - BBC Somali
Toogasho ka dhacday Fort Hood
3 Abriil 2014
Image caption Askar ka tirsan ciidamada mareykanka ee ku sugan saldhigga Fort Hood ee gobolka Texas
Taliyaha saldhigga Fort Hood ee ku yaala gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in nin hubeysan uu toogasho ku dilay saddex askari, 16 kalena uu dhawacay toogasho ka dhacday gudaha saldhiggaasi.
Ninkaasi dableyda ah oo ah askari ka tirsan ciidamada mareykanka ayaa markii dambe isaga is toogtay oo halkaasi ku dhintay.
Janaraal Mark Milley ayaa sheegay in askarigaasi dilka geystay oo ka soo shaqeeyay dalka Iraq sanadkii 2011-kii laga daweynayay xanuun dhanka maskaxda ah.
Jenaraal Milley waxa uu meesha ka saaray jiritaanka astaamo muujinaya in falkaasi uu ahaa mid argagixisnimo.
Saldhiggaasi militari ee Fort Hood ayaa ah halkii sanadkii 2009-kii ay ka dhacday toogasho ay ku dhinteen 14 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen soddomeeyo kale kaddib markii Nidaal Xasan oo ah askari ka tirsanaa militariga mareykanka isla markaana ahaa dhakhtar dhanka maskaxda uu toogasho halkaasi ka geystay.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in ay tahay wax aad looga naxo isla markaana qalbi jab ah in mar kale ay toogasho ka dhacdo gudaha saldhiggaasi.